ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: တိုက်ပွဲနဲ့ အတူ ကျောင်းသားတပ်မတော်ပြန်လည်ပေါ်လာရခြင်းအပေါ် နားမလည်
တိုက်ပွဲနဲ့ အတူ ကျောင်းသားတပ်မတော်ပြန်လည်ပေါ်လာရခြင်းအပေါ် နားမလည်
ပြည်တွင်ဂျာနယ်တခုထဲက တိုက်ပွဲနဲ့ အတူ ကျောင်းသားတပ်မတော်ပြန်လည်ပေါ်လာရခြင်းအပေါ် နားမလည်ဟု..နှင့် ပတ်သက်၍..
by Kayin Lay on Friday, January 11, 2013 at 3:59pm ·
မငယ်တို့ တွေမရှိတဲ့တော့နောက် မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတပ်မတော်က မ၇ှိတော့ဘူးလိုဆိုရင်မှားပါလိမ့်မယ်...၁၉၉၃ခုနစ်ကစလို့ မြောက်ပိုင်ကျောင်းသားတ့ပ်မတော်ဟာ တပ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်...အဲဒီအချိန်မှာ ကေအိုင်အေက စတင်ပြီးအစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးစကားပြောနေခဲ့ပြီ..။ တိုက်ပွဲသံတွေစရပ်နေပြီ။ ဒါပေမယ့်မြောက်ပိုင်းဟာ ရပ်မသွားဘူး.စစ်မတိုက်တဲ့အချိန်မှာ တပ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ ဆေးသင်တန်း..ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ရေဒီိယိုကြားဖြတ်သတင်းဖမ်းယူရေးသင်တန်း..နိုင်ငံရေးနဲံ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မွမ်းမံသင်တန်းတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တချို့ပြောရရင် ၁၉၉၆ခုနစ် နောက်ဆုံးအဲ့ဒီနယ်မြေကနေ တပ်ဖျောက်မသွားခင်ထိ တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်နိုင်သမျှ စုစုစည်းစည်းနဲံထပ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်.. တိုက်ပွဲဝင်သင်္ကြန်တခွေနဲ့တေးစီးရီးတခုကိုထပ်မံထုတ်ခဲ့ကြတယ်။ တပ်တွင်းမွေးမြူရေးနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ကေအိုင်အိုက အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေးကို လုံးဝလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာ မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတပ်မတော်ဟာ သူ့ ၇ဲ့ နဂိုမူလချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာမို့လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲမရှိတော့တဲ့ နယ်မြေကိုစွန့် ခွာပြီး တပ်ဖျောက်ခဲ့တယ်။ မြောက်ပိုင်းဟာ နယ်မြေမဲ့တဲ့ အခြေခံစခန်းမရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖြစ်လာတယ်။ အဲ့ဒီအခြေအနေ အကြတ်အတည်းကိုကြုံလာတဲ့အခါ အိမ်ထောင်သည်တချို့ နဲ့ဆန္ဒရှိသူရဲဘော်တချို့ ကို လွတ်လပ်စွာဆန္ဒကောက်ယူပြီး အိပ်ပြန်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ သူတို့ ပြန်တဲ့အခါလည်း အဖွဲ့ အစည်းက စနစ်တကျစီစဉ်ပို့ ဆောင်ခဲ့တယ်။ နောက်တခုက အဲ့ဒီအချိန်မှာတပ်မှာရှိတဲ့လူနဲ့ လက်နက်တွေကို နေရာချဖျောက်ထားဖို့ အစီအမံတွေလုပ်လာရတယ်.။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ လူသတ်မှုမှာပါခဲ့တဲ့ တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကပဲ စီမံကွပ်ကဲခဲ့တာ။ လူနဲ့ လက်နက်တွေကို စနစ်တကျပြောင်းရွှေ့ သယ်ယူနိုင်အောင် စီမံခဲ့တယ်။ ရဲဘော်တွေစားဝတ်နေရေးကို အခိုက်အတန့် ကာလမှာ ပြေလည်စေဖို့ အတွက် စီစဉ်နေရာချခဲ့ရတယ်။ တပ်အသွင်တခုအဖြစ်ပြန်လည်လှုပ်ရှားဖို့ အခြေအနေတခုရောက်တဲ့အထိ ရဲဘော်ရဲမေတွေ ပင်ပင်ပန်းပန်း ဆင်းဆင်းရဲရဲဖြတ်သန်းခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒီအခိုက်အတန့် ကာလဟာ သုံးနစ်နီးပါးကြာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ရဲဘော်တွေဟာကြံခင်း..လယ်ကွင်း ဖရဲခင်း တွေထဲမှာ နေခြစ်ခြစ်ပူနေတဲ့အောက်မှာ ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာဖြတ်သန်းကြတယ်။ ဒါဟာ မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတပ်မတော် ပျောက်ကွယ်သွားတာမဟုတ်ဘူး..။ တပ်ဖျောက်ထားတာ။ အခြေအနေပေးတဲ့အခါ တပ်ပုံစံ ပြန်လည်စုဖွဲ့ ပြီး လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကိုဆက်လက်ဆင်နွဲဖို့ ရှမ်းပြည်ဖက်ကို ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။ အက်စ်အက်စ်အန်အေ ထဲကိုစရောက်တယ်... သူတို့ လည်း ငြိမ်းအဖွဲ.့ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အက်စ်အက်စ်အေတောင်ပိုင်းအထိ ခရီးဆက်ခဲ့ရတယ်..ရဲဘော်တချို့ လမ်းခုလတ်မှာ တိုက်ပွဲကျတယ်..မြောက်ပိုင်းကနေ အရှေ့ တောင်ပိုင်းအထိ ခရီးပြင်းနင်ခဲ့ကြရတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်ကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာရှေ့ ကနေတက်တိုက်ခဲ့ကြတယ်။ ယာယီအက်စ်အက်စ်အေတပ်မဟာ ၂၄၁ကိုစုဖွဲ့ ပြီး ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်တယ်။ ဒါပေမယ့် မူလရည်မှန်းချက်ကိုပြန်လည်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အထက်မြန်မာပြည်ဖက်ကို ပြန်အတက် အင်အားကြီးတဲ့ ရန်သူရဲ့ပိတ်ဆို့ မှုကိုခံပြီး အဖမ်းခံရတယ်။ အခုထောင်ထဲမှာ ဖြတ်သန်းနေခဲ့ကြရတယ်. ....ရဲဘော်တချို့ တရုပ်ပြည်နယ်စပ်မှာ ကျန်ရှိနေပြီး ကိုယ်တတ်တဲ့ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းနဲ့ ဆက်လက်ရပ်တည်နေတယ်..မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တချို့ ကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်.။ ကချင်မြေမှာ အစိုးရတပ်ကစလို့အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးစည်းဖောက်တဲ့အတွက် သေနတ်သံပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ အခြေအနေတခုအရ တေပ်ဖျာက်ထားတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ဟာ ကေအိုင်အေနဲ့ ညှိနိုင်းပြီး ပြန်လည်တဖန်တိုက်ပွဲဝင်လာကြတယ်။ ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ.. ဘယ်နေရာမှာ ဖိနိပ်တဲ့အစိုးရရှိမလဲ..အဲဒီနေရာမှာ ဖိနိပ်တာကိုဆန့် ကျင်တော်လှန်မဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရှိနေမယ်...
မှတ်ချက်....။ ဒီနေရာမှာ ခေါင်းဆောင်များရဲ့ ဦးဆောင်စီမံမှုကို ဖော်ပြတာဟာ သူတို့ တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်မှုကို ကာကွယ်ပေးခြင်းမဟုတ်... မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတပ်မတော် ဘာလို့ဘယ်လိုပေါ်ခဲ့သလဲဆိုတာကို သိအောင်ဝေငှခြင်းဖြစ်တယ်။ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ခေါင်းဆောင်များက သူတို့ ယူခဲ့တဲ့ တာဝန်အတိုင်း တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ကြမည်ဟု ကျနော်ယုံကြည်သည်..ဘာကြောင့်ပြောနိုင်သလဲဆို သူတို့ နဲ့ အတူ ကျနော် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ဘူးလို့ဖြစ်တယ်။
Hmone Shwe Yi ဘယ်နေရာမှာဖိနှိပ်တဲ.အစိုးရရှိမလဲ-အဲဒီနေရာမှာဖိနှိပ်တာကိုဆန်.ကျင်တော်လှန်မဲ.ကျောင်းသားတပ်မတော်ရှိနေမယ်-
January 11 at 4:14pm · 9
Do Gyi NBABမပဟာကျွန်တော်တို့ရင်ထဲကအာဏာရှင်စစ်အစိုးရအားတော်လှန်ဖို့ပေါက်ဖွားလာတဲ့ကျောင်းသားတပ်ဘယ်နိုင်ငံမှာမှမရှိတဲ့ကျောင်းသားတပ်ပါ အောင်မြင်မူ့ပန်းတိုင်သ်ု့အရောက်သွာမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မပABသို့ရောက်ခဲ့ရောက်ခဲ့တဲ့သာမန်တော်လှန်ရေးရဲဘော်တဦးအနေနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာဦးဆောင်သူတွေရဲ့ညံ့ဖျင်းမူ့တွေဒေသစွဲအာဏာစွဲတွေဦးဆောင်သူအားအလွန်ဆန်နိုင်မူ့တွေကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ပြီးဦးဆောင်သူနေက်ကအခါတော်ပေးတွေဟာသာမန်ကျောင်းသားတွေရောဟုတ်ကြရဲ့လားစဉ်းစားစရာလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရင်နာစွာနဲ့ABမပကိုခွာခဲ့ရပေမဲ့ABအပေါ်ထာဝရသစ္စာရှိနေမှာပါ
January 11 at 5:15pm via mobile · 13
Kayin Lay ဒိုကြီး...ငါ့မျက်လုံးထဲမှာ မင်းကိုမြင်ယောင်ဆဲပဲ...ငါရဲ့ အမြင်ဟာ မင်းတို့ ကိုသင်တန်းပေးတုံးက သင်တန်းသားဘ၀ကိုရော မင်းရဲ့ ရဲဘော်ဘ၀ကိုရော မင်းမပြန်ခင်အချိန်က နေခဲ့တဲ့တဲလေးထဲမှာငါတွေ့ ခဲ့တဲ့ပုံရော...ကွက်တိမြင်နေသေးတယ်..နောက်ပြီး မင်းထိမ်းသိမ်းခံနေရစဉ်ကာလက မင်းနဲ့ အတူစကားပြောခဲ့တုံးကရောပဲ....။ အမှန်တရားဆိုတာ ပျောက်ကွယ်သွားတာမရှိပါဘူး...။ ခေတ္တငုတ်သျှိုးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်...။တခုတော့ရှိတယ် အခုတော့မင်းလည်း အသက်အရွယ်ရသွားပြီဆိုတော့ ငါမမြင်တတ်တော့ဘူး... ငါ့ထက်ပိုအိုရင်လည်းအိုနေမှာပေါ့...
January 11 at 5:22pm · 4
Kayin Lay အော် ပိုပြီး မှတ်မိစရာက မံဝိန်းနယ်မြေ..ကေအိုင်အေတပ်ရင်း၁၂မှာ ဗကပတပ်စုရယ်..ပလောင်တပ်ခွဲရယ်..တို့ မကဒတ တပ်စိတ်ရယ် အတူနေတုံးကအချိန်ကို ပေါ့...ပလောင်ကလုပ်တဲ့ လဖက်ပုတ်...တို့ တွေအထုတ်ပေါင်းများစွာစားခဲ့ဘူးတယ်..
January 11 at 5:25pm · 4
Nang Aung Htwe Kyi နားမလည်တာခဲ့တာကို ခုလိုသိအောင်ပြောပြတာ လက်ခံတယ်။
နားမလည်တာတွေအများကြီးထဲက တခုကို ထပ်ပြောပြပေးပါလား ။
၁၉၉၂ ခုနှစ် ခန့် မှန်းခြေ ဇွန်လောက်မှာလား ။မျိုးဝင်းသေတာ ။အဲ့ဒီနောက်
ပိုင်းမှာ ရော်နယ်အောင်နိုင် ၊ သံချောင်း တို့ မြောက်ပိုင်းကို ဦးဆောင်နေတုန်း
က မငယ်တို့ ၉ ဦးကို ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ပြီးအကျယ်ချုပ်အနေနဲ့ ဖမ်းထားချိန်
မှာ မြောက်ပိုင်းကျောင်းသား တပ်က ဗန်းမော် ဘက်တွေရယ် ၊ မိုးညင်းဘက်တွေရယ်
တွေမှာ ကျောင်းသားတပ်အင်အားစုဆောင်းရေး အတွက် စုဆောင်းရေးဆွဲ(လူဖမ်း)
ပြီး ကျောင်းသား ရဲဘော် ရဲမေ လုပ်ခိုင်းတာကို ပြောပြပေးပါလားစိုးစိုး ။
မငယ် အခုပြည်တွင်းဝင်တော့ စုဆောင်းရေးဆွဲ(လူဖမ်း) ခဲ့ဖို့ တာဝန်ပေးခြင်းခံရတဲ့
သူ ကိုယ်တိုင် ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေပြောကြတာလေ။ လူတွေအများကြီးပြန်ဆုံ
ကြတယ်ကွာ။ ဟိုး ဖားကန့် ဆားမှော်ဘက်ရောက် နေသူတွေလည်း မငယ်ဆီဖုန်းဆက်
ဆက် စကားတွေပြော ၊ အဘောက် တို့ အမ်းတို့ အများကြီးကွာ ။ ထက်ထက်တို့ ဖုန်း တွေဆက် .. အားမောင်ရေ လူနာမည်တွေချရေးရင် အများကြီး ဟ ။ မသွယ် မနွယ် တို့ တွေနဲ့ တွေ့ ။ သီတာ
တောင်မငယ်ရောက်နေတာသိတာနဲ့ သူ့ခရီးစဉ်ဖျက်ပြီး တွေ့ ကြရတာ ။ဖြစ်ခြင်တော့ မငယ် သွား
တဲ့ နေရာ ရောက်တဲ့ အရပ် မငယ် ထွက်သွားပြီးတာနဲ့ အိမ်ရှင်မနွယ်ကို ချက်ခြင်းဝင်မေးခံရတာ
နဲ့ သီတာ ကို လုံခြုံရာ ပုန်းပေးကြပါလေရော ။စိုးစိုးမှတိမိလား မိုးညင်းက ဆရာတော်လေ ။
မငယ်တို့တအုပ်ကြီး သွားပြန်ဖူးကြတာ ဆရာတော်မှာ မငယ်တို့ ကိုကြည့်ပြီး မျက်နှာ မှာ
အပြုံး မပျက်ဘူးကွာ ။လွမ်းစရာလေးတွေဘဲ။ ကျားလေး တယောက်ကတော့ဖြင့် အရင်အတိုင်း
ဆရာတော် ကို မုန့်တောင်းစားရုံမကဘူး အပြန်အတွက်နှိုက်ယူလာသေး တော့ မြောက်ပိုင်း
ပြန်ရောက်သွားသလိုဘဲဟာ ။မလေး ကတော့ စီးပွားရေးသောင်းကျန်းနေတာ နဲ့ ငါနဲ့ တေ့လွဲလေးဖြစ်သွားတယ် ။
January 11 at 5:36pm · 6
Kayin Lay မငယ်စာထဲမှာ လူသစ်စုဆောင်းရေးကိုရေးထားပြီမို့ ကျနော်အထူးပြောစရာမလိုတော့ပါ..။ article ခေါင်းစဉ်က နားမလည်ဘူးဆိုလို့ပြောပြလိုက်တာပါ...။ အားရမ်တီးက ရန်ကုန်မှာရှိနေရက်နဲ့ ဘာလို့ ဖုန်းပဲဆက်တာလည်း...
January 11 at 5:41pm · Edited · 1
Kayin Lay မငယ်သွားလို့ မေးခံရတာထူးဆန်းတယ်နော်..ကျနော်သွားခဲ့တော့ ဘယ်သူမှမေးတယ်လို့ ပြန်မကြားရဘူး..အားလုံးတွေ့ ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ ကောင်းပါတယ်.. ကျနော်ကတော့အချိန်မရခဲ့ဘူး...သွားကတည်းက ဆုံးသွားတဲ့အမိုးအုတ်ဂူကိုဂါဝရပြုဖို့ ပဲ..ကျန်တာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး... အစီအစဉ်လည်းပါမသွားဘူး.. ရဲဘော်ရဲမေအားလုံးနဲ့ တွေ့ ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ အတိုင်းအတာမရှိ ဗိုင်းတာမလည်း မသိနိုင်တဲ့ ပျော်စရာတခုပေါ့။ဗျာ
January 11 at 5:44pm · 5
Do Gyi NBသီတာကိုပြောပေးပါသတိရနေပါတယ်လို့ဗန်မော်ခရိုင်လက်ချာဟောမှားကျွေးခဲ့တဲ့လက်ဝါးရာလေးကဒိုကြီးပါးပြင်မှာအှတ်ရစရာလေးပေါ့ မသိလို့ရိုက်ခဲ့တာလို့ဘဲမြင်ပါတယ်အညှိးမထားပါဘူးကိုယ်တိုက်ပွဲဝင်မောင်နှမတွေဘဲဒါပေမဲ့အဲဒိအချိန်ကရင်ထဲမှာအရမ်းကြေကွဲငိုကြွေးနေရတာပေါ့
January 11 at 5:47pm via mobile · 6
Kayin Lay ဒိုဇာ မင်းက မငယ်လာတာလည်းသိတယ်..မင်းကိုယ်တိုင်ဘာလို့ သွားမတွေ့ တာလဲ... ပဲခူးနဲ့ ရန်ကုန် အရင် အနစ်နစ်ဆယ်တုံးကလောက် မဝေးတော့ပါဘူး.. နေ့ ချင်းပေါက် ဒေါက်ကနဲရောက်နေနိုင်ပြီမဟုတ်လား
January 11 at 5:50pm · 1
Do Gyi NB သွားတယ်လေ
January 11 at 6:05pm via mobile · 2
Nang Aung Htwe Kyi အားရမ် နဲ့ တွေ့ တယ်လေဟာ ။ ၃ ခေါက်တောင် ။ new year ည မှာ သူ့ အိမ်
ခေါ်လို့ ငါတို့တွေသွားကြသေးတယ် ။ ဦးသောင်း တောင်ငါတို့ နဲ့ အတူသွားကြ
ကြတာလေ ။ ပြီးအဲ့ဒီကနေမှ အားရမ်တို့ ဇနီးမောင်နှံ နဲ့ မသင်းသင်း ဖိတ်တဲ့ပွဲ
သွားကြတယ် ။ ငါမပြန်ခင်ည မှာ နှုတ်ဆက် ညစာ M3 ကိုသွားကြသေးတယ်။
အားရမ် ချစ်ခင်ပွန်း နဲ့ သင်းသင်းညီ တို့ တိုင်ပင်ရွေးတယ် ဆိုလား။ဒီလင်မယား
အိုမင်းအောင်ပေါင်းကြရပါစေသား ။ ထမင်းဟင်းချက်အရမ်းကောင်းသကွယ် ။
SB လိုက်တာ မစမ်းပါလေ ။ US က တယောက် black list အပယ်ခံရပြီး ပြည်တွင်းဝင်
ကတည်းက ကြိုပြောထားလို့သိထားတယ် ။ နိုင်ကျဉ်း တွေနဲ့ အတူသွားတဲ့ မင်းကွန်းခရီးစဉ်အပြီး
အဲ့ဒီည ငါ့ ဟိုတယ်မှာ ငါ့ passport လာတောင်းလို့ ငါနဲ့ သင်းသင်းနဲ့ အောက်ဆင်းတော့မှ
ကိုယ်တော်တွေတပုံကြီး .. ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းလေးက ငါ့ passport copy ထပ်ယူထား
လိုက်လေရဲ့ ။ ဘာမှမလုပ်ပါဘူး ။ လိုက်ကြည့်တာလောက်ပါဘဲ။
January 11 at 7:08pm
Kayin Lay လိုက်ကြည့်တာကတော့ မသွားခင်နစ်လလောက်ကတည်းက မစားမသောက် ၀ိတ်ချပြီးသွားတော့ တအားလန်းသွားလို့ ဖြစ်မယ်... ဘူရှိုးရှိုးတာမဟုတ်ဘူး ဘူးရှိုးရှီုးတာလေ..
January 11 at 7:11pm · 1
Nang Aung Htwe Kyi ဒိုဇာက ခလေး ဆိုတော့မှ နင့်စုဘူးကြီးကော စိုးစိုး .. ပေါက်သွားပြီလား။
အရှိန် ယူနေစဲဘဲလား ။အပြင်ထွက်ပြီဆိုရင် ဓါတ်ပုံ ပို့ ပေး ။ကြောင်တို့
ကိုရဲတုို့ ပိုင်ဆိုင်မှု့လေးတွေ လည်း သွက်ကြသလားမမေးနဲ့ ။
January 11 at 7:20pm · 1
Ko Lin Wai Aung ဒိုကြီးရေ အဲဒီတုံးကသီတာက ကလေးအရွယ်ပေါ့ မင်းနားလည်နိုင်တာလေးစားပါတယ်.,တို့တွေABကိုရော ရဲဘော်တွေကိုရော စိတ်မနာခဲ့ကြပါဘူးကွာ
January 11 at 7:30pm via mobile · 2
Nang Aung Htwe Kyi ဟဲ့ ၅၀ ရှိပြီဟဲ့ ။ အိုပြီ ။ ငါ့တူ ကမွေးတဲ့ သား က ငါ့ကို အဖွား
ခေါ်လို့ တွန့်သွားတာဘဲ ။ ငါ့အိမ်မှာငါ play station ဆော့လို့ ကောင်းတုန်း။
ဂစ်တာဟီးရိုး ဝယ်ပြီး ဆော့ကောင်းတုန်း ... ချာတိတ်က ငါ့ကို အဖွားတဲ့ ။
January 11 at 7:31pm · 3
Kayin Lay မငယ်ကိုအဖွားခေါ်တာ ၁ယောက်ပါ..ကျနော့်မှာ တူ တူမ ၂၃ယောက်က ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ၁၃ယောက်သော မြေးတွေရှိနေပါပြီ...ဘာတဲ့..အဖိုးလေးတဲ့..... ဒီကကောင်အလန်းကြီးရှိသေးတယ်
January 11 at 7:49pm · 4
January 11 at 8:03pm
Do Gyi NB ဗန်မော်ရင်းမှာလဲဒီလိုဘဲကိုရဲရေလက်မောင်းကabတံဆိတ်အခွာခံရတော့မျက်ရည်တွေကျခဲ့ရတယ်
January 11 at 8:06pm via mobile · 10
Do Gyi NB စဉ်းစားစရာကထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ခံသန်းဇော် ဇော်ဇော်မင်းစတဲ့သူတွေပြည်တွင်းရောက်တော့စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေရဲ့အရျပ်ကိုဘာလို့ခိုဝင်ကြတာလဲ
January 11 at 8:30pm via mobile · 3
Nay Naw ဦးဦး ရဲဘော် ဇာနည် များနှင့် တကွ ဒေါ်ဒေါ် ရဲမေ များအား အစဉ်လေးစားလျှက် ကျွန်တော် အညတရ မောင် နေနော်မှ အလေးပြုအပ်ပါသည်။
January 11 at 11:00pm · 2
Skyheart Winko တခါတုံးက ABSDF ကနိူင်ငံတကာကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စာ သေချာ စုံစမ်း စစ်ဆေးပြိးမှ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတာပါတဲ့ ။ https://www.facebook.com/SkyHeartStudio/posts/520646044634705
January 11 at 11:52pm
Skyheart Winko (ချီးချောက်နှုးပြီး နိုင်ငံရေးစင်ပေါ်တက် ယပ်ခတ်နေပေမဲ့ ချီးဆော်နံလို့ပါ)... ABSDF သမိုင်းကောင်းမှ သေသွားတဲ့ရဲဘော်တွေ နာမည်ကောင်းမည်။မြောက်ပိုင်းပြန်ရဲဘော်တွေ ခုတုံးလုပ်ခံရမည် လောလောဆယ် ABSDF က၂၅နှစ်မှာ အခုမှပြန်ပေါ်လါတယ်တို့၊ ကချင်က ABSDF အ၀တ်တွေဝတ်ပြီးတိုက်နေတယ်တို့ နည်းနည်းလဲကြိုမြင်ကြပါ အခုဒါတွေပြောနေသူက ၂၅နှစ်အတွင်း လုပ်နိုင်တဲ့ နေရာမှာ သိခဲ့တာတွေနဲ့သေသွားတဲ့ ရဲဘော်တွေအတွက်ဘာလို့မလုပ်ခဲ့တာလဲ.၀ိုင်းပြီးဖြေရှင်းပေးဖို့ ဘာလို့မတောင်းဆိုကြတာလဲ..ဖြေပေးပါ။... မြောက်ပိုင်းရဲဘော်တို့ မရိုးကြပါနဲ့တောင်းပန်တယ်.... သူကဦးဆောင်ပြီးဘယ်လမ်းကိုသွားနေတာလဲ မြင်အောင်ကြည့်ပါ။....သမိုင်းဆိုတာဘယ်တော့မှ ဘယ်သူမှဖြောက်လို့မရဘူး နောက်သဘောမပေါက်ရင် ဆက်မပြောတော့ဘူး မြောက်ပိုင်းလို့ခွဲခြားနေသရွေ ငါတို့နဲ့ မဆိုင်တော့ဘူး ကျောင်းသားအလံတစ်တစ်ခု အောက်ကညီအကိုတွေလို့ခံယူကြရင် ရဲဘော်သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ငါအသေခံလိုက်မယ်။ ၀င်းကို၀၉၅၀-၈၂၈၀၈ (ဘယ်မှာလဲနန်းအောင်ထွေးကြည်) သိပြီလါးငါရှာစရာမလိုတဲ့ သမိုင်းကို ငါရှာလိုက်တယ်ဆိုတာ...နန်းအောင်ထွေးကြည်ရေ အခုမှပြည့်စုံသွားတယ်.. ထပ်ကစားရင်တော့မကောင်းဘူး....https://www.facebook.com/aungnaing.thu.50/posts/265866606876063
ABSDF ..မြောက်ပိုင်းပြန်တွေက..သေဆုံးသွားသူတွေအတွက်ဆွမ်းမကျွေးဘူးလို့ပြောဆိုခြင်းကိုအမှန်ဖြစ်အောင်ဝင်ပြောခြင်း............................................................................................................................................ABSDF မြောက်ပိုင်းပြန်တွေကိုတော်တော်လေးပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်...ဘာတဲ့..သေဆုံးသွားသူတွေအတွက် အလေးပြုတာတို့...ဆွမ်းကျွေးတာတို့လုပ်ပြီးပြီလားလို့ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်...ကိုယ်သိထားတာကိုပြောမှဒီပို့စ်တွေကိုဖတ်သူတွေအမှတ်မမှားမှာမို့ပြောပြရပါတော့မယ်...ကိုဘိုဘိုနာမည်လဲထည့်ရေးထားတာတွေ့တယ်...ကိုဘိုဘိုတို့အခုထိုင်းကိုရောက်နေတဲ့..မနန်းစောတို့ဆိုတာ..တောထဲကပြန်ရောက်ကတည်းက အင်မတန်ကျပ်တည်းလှတဲ့ယခင်အစိုးရလက်ထက်မှာ..နှစ်စဉ်မပြတ်..သေဆုံးသွားသူတွေအတွက်ရည်စူးကာ..ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေကိုဆွမ်းချိုင့်ပို့ခြင်းအပါအ၀င်ကောင်းမူကုသိုလ်တွေကိုအမြဲမပြတ်လုပ်ပေးခဲ့ကြတယ်..မန္တလေးမှာဆိုရင်..မအမာနီတို့ကဦးဆောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်...ယခင်အစိုးရလက်ထက်မှာတတ်နိုင်သလောက်လုပ်ခဲ့ကြတာပါ...စုပေါင်းလုပ်တာကိုထင်ထင်ရှားရှားပြောရရင်ဖြင့်၂၀၁၂ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့မှာမြောက်ပိုင်းပြန်များစုပေါင်းကာ..ရန်ကုန်အလုံက ..ရွှေအိုးစည်ကျောင်းမှာသေဆုံးသွားသူတွေအတွက်ရည်စူးလှုဒါန်းကာရေစက်ချအမျှဝေတာကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်..အဲ့ပွဲကိုကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ ..၈၈ တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်.ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်းတို့ဒေါ်နေရီဗဆွေတို့တက်ပါတယ်...ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်းရဲ့မွေးစားသားလို့လူသိများတဲ့..သုဝဏပေါ်ဆန်းမွှေးလမ်းကမောင်မောင်ကြွယ်လဲအသတ်ခံရတဲ့ထဲမှာပါတယ်လေ.နောက် နှစ်ရက်အကြာမှာ..မန္တလေးက မြ၀တီမင်းကြီးကျောင်းမှာရေစက်ချအမျှဝေတာကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်...အဲ့ပွဲကို ကိုမြအေးနဲ့၈၈ တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်.....ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကိုမြအေးတို့သက်ရှိထင်ရှားရှိနေပါသေးတယ်....မေးလို့ရပါသေးတယ်...မြောက်ပိုင်းပြန်တွေလုပ်ပြီးတနှစ်လောက်ကြာမှ..ABSDF လက်ရှိဥက္ကဌလို့ဆိုတဲ့ကိုသံခဲတို့ရန်ကုန်ခဏလာရင်းမဂ္ဂင်ကျောင်းမှာလုပ်သွားတာပါ...ခုလိုကိုယ်သိတာကိုယ်ဝင်ပြောရတာက သေချာမသိသေးသူတွေသမိုင်းအမှတ်မှားမှာစိုးတဲ့စေတနာနဲ့ပါ............................................
.Aung Gyi Gsc shared Skyheart Winko's status update.
Skyheart Ko Wink............................................မင်းယုံနေတဲ့ နန်းအောင်ထွေးကြည်၊မေသင်္ကြန်ဟိန်း၊စမ်းချောင်းဘိုဘိုတို့ သေသွားတဲ့ ရဲဘော်တွေကို အလေးပြုပွဲလုပ်ပြီးပြီလါး ဆွမ်းကောပေါင်းပြီးကျွေးပြီးပြီလါး အပြုသဘောတော့လိုချင်တယ် အဖျက်သဘောစိက်မ၀င်စားဘူး။ စမ်းချောင်းဘိုဘိုကို မြောက်ဖတ်ကလူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ခေါ်ပြီး မဂ္ဂင်ကျောင်းမှာ ကိုသံခဲဦးဆောင်ပြီး ABSDF အနေနဲ့ သေဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက် ရေစက်ချ အမျှပေးပြီး အလေးပြုခဲ့တယ်..ဒါ့အပြင် မန္တာလေးမှာ ကိုမိုးသီးဇွန်အဖွဲ့ဟာ မြောင်ပိုင်းရဲဘော်ဟောင်းတွေ သေဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်မိသားစုတွေနဲ့ပေါင်းပြီး ရေစက်ချ အမျှဝေ အလေးပြုခဲ့တယ်....ပြန်လါသမျှ ရဲဘော်ရဲမေတွေအားလုံးလုပ်သင့်တာကို အရင်လုပ်ခဲ့ကြတယ် ဒါဟာ ငါတို့အပြုသဘောဘဲ..အဲဒါသမိုင်းနော်...ရေးတော့မယ် မကြာခင်.....အခု ဘာလဲအမှန်တရား ကော်မရှင်တဲ့ အဲဒီနန်းအောင်ထွေးကြည် NBရဲလင်း စမ်းချောင်းဘို မေသင်္ကြန်ဟိန်းတို့ ကော်မရှင်က အဲဒါအရင်လုပ်ပြီးပြီလါး မသိလို့နော်.....ဗမာတွေထင်ပါရဲ့....
Aung Gyi Gsc likes this.
January 11 at 11:52pm · 1
Skyheart Winkoှရှုပ်ပြီးပြန်ရှင်းတာကိုကမှားနေတာလေ။https://www.facebook.com/photo.php?fbid=250842048379613&set=a.159701234160362.33660.100003614593126&type=1&theater
January 12 at 2:05am · Edited
Aung Naing Thu လောလောဆယ်တွင်ABSDF ဥက္ကဌဟောင်းဟုဆိုသူမိုးသီးဇွန်ကိုလူသတ်မူဖြင့်ကိုဌေးနိုင်ဆိုသူရဲ့မိခင်ကလူသတ်မူဖြင့်အမူဖွင့်ထားပါသည်။ထိုသတင်းကိုမီဒီယာများတွင်ဟိုးလေးတကျော်ဖော်ပြထားပါသည်
January 12 at 5:50am · 1
Skyheart Winko ဘော်လီဘော ကျွမ်းကျင်တဲ့ငါတို့ရဲဘော်ကိုသတ်တာလွန်သလိုဘဲနော် အဲဒီသက်တဲ့ အနားမှာရှိတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ချင်တယ် ငါ့ဘေးမှာ အားလုံးအဆင်သင့်ပါ သူတစ်ကယ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆို ငါကိုယ်တိုင်ခလုက်နိပ်ပေးမယ်...ဟားဟားဟား.....
January 12 at 6:11am · Edited
Aung Naing Thuဒါကတရားသူကြီးအလုပ်ပါသူဆုံးဖြတ်ရမှာပါ.....မီဒီယာသမားတယောက်ကြိုးပေးသတ်ခံရတာသူ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်..ဒါကြီးပြပြပြီးမီဒီယာတွေကိုလိုက်မချောက်ပါနဲ့..ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကကိုယ့်သမိုင်းပါ..မိုးသီးဇွန်လူသတ်တယ်မသတ်တယ်တခါမှမပြောပါ..အမူဖွင့်ထားတယ်ပဲမီဒီယာတွေကပြောတာပါ
January 12 at 6:31am
Skyheart Winko တရားစွဲတယ်ဆိုတဲ့ ဒီပြဿနာ ဘယ်ကစတာလဲ ဘယ်တုန်းကလဲ ဘယ်သူကလဲ သိကြပါသလါး။..........
January 12 at 6:34am · 1
Aung Naing Thuတရားသူကြီးကိုမေးကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဗျ...စစ်မှာကသူစစ်မှာဆိုတော့လေ..မီဒီယာကမူခင်းသတင်းလိုရေးထားကြတာတွေ့တာပဲ....ဘယ်သူကဘယ်သူ့ကိုဘယ်လိုအမူဖွင့်တယ်ပေါ့ဗျာအဲလိုရေးကြတာလေ...အပြစ်ရှိတယ်မရှိဘူကျော်ပြောကျော်ရေးလို့မရဘူးအဲ့လိုပြောရင်ရေးရင်တရားရုံးမထေမဲ့မြင်ပြုမှုဗျ...ကျော်ပြောလို့ကိုမရတာ...ကျော်ပြောရင်ဥပဒေချိုးဖောက်တာဗျ....တချို့ကလဲပြောချင်တာတွေရှိချင်ရှိမှာပေါ့...ပြောရင်ပြောတဲ့သူသူ့သဘောသူဆောင်မှာပေါ့ဗျာ.....
January 12 at 6:42am
January 12 at 6:49am · 1
Skyheart Winko အဲဒါအမှန်ဘဲ ဒါကြောင့် ညီညွက်နိုင်ကြပါစေဆိုပြီ AB ပြန်ဖွဲ့တယ် တစ်ဖတ်ကလဲ အမှန်တရားဖော်ထုက်ရေးဆို ကြွေးကျော်ပြီးလုပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ တားမရ ဆီးမရ ရန်ဖြစ် တားတဲ့သူကိုဝိုင်းတွယ်ကြတယ်......တောင်းပန်တယ်ပြောလဲမရ......တစ်ခုတော့ ပြောချင် ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်လုပ် ဘာမှမရဘူး နားလည်ထားတယ်....ဒီလိုပြောရင်ဘာပြောမယ်မှက်လဲ နားလည်ရင်ဘေးမှာထိုင်နေလို့....တော်ပါတော့ဗျာ.....
January 12 at 6:52am · 1
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 9:56 PM